भौगोलिक कारणले विकासमा समस्या – News Portal
फिचर राजनीति विचार समाज
December 14, 2018 epradeshLeaveaComment on भौगोलिक कारणले विकासमा समस्या
संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । २०७४ साल असारमा भएको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । २० वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन बनेको स्थानीय सरकार अहिले पूर्णरुपमा क्रियाशील रहेको छ । धेरै अपेक्षा, योजना र आश्वासन बोकेर आएका जनप्रतिनिधिहहरुको एक वर्ष कसरी बितेको छ ? एक वर्षको अवधिमा अपेक्षा अनुसारको स्थानीय तहमा काम हुनसकेको छ की छैन ? कस्ताखालका समस्या, चुनौती, जटिलता, अवसर भूमिका देखिए त्यो विषयमा विशेषरुपमा आज हामीले जनप्रतिनिधिका एकवर्ष अन्तर्गत खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ । यो अंकमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष विजय वि.क.सँग उनी निर्वाचित भएपछिको एक वर्षको अनुभवका बारेमा कुराकानी गरेकौ छौँ ।
निर्वाचित भएर आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको पूरा एकबर्ष भएर पनि यहाँसम्म आईपुगियो । यहाँसम्म आईपुग्दा धेरै सिकाइ, अनुभवसँगै काम गर्दा थुप्रै झन्झटहरु भोग्नुपरेको र केही काम गर्ने अवसरको रुपमा समेत लिएको छु । यहाँसम्म आईपुग्दा धेरै कुरा सिक्ने र तोकिएको जिम्मेवारी र केही नयाँ कामको समेत थालनी गरियो । उपमहानगरपालिकाको भौगोलिक विकटताकै कारण पछि परेको वडा भएको कारण विकास निर्माणका काम र योजना निर्माणको लागि पहल गर्नमै आफूलाई व्यस्त भएको ठानेको छु । जनप्रतिनिधिको रुपमा काम गर्ने अवसर पाए पनि स्थानीय तहका नीति, नियम काम गर्ने प्रक्रिया र जनताको विकासप्रतिको अपेक्षा धेरै भएकोले केही समस्या र धेरै चुनौतिको रुपमा लिएको छु ।
काम गर्दा आएका समस्या र चुनौतिलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्दै जनताको साथमा रहेर वडाको विकास निर्माणको कुरामा निरन्तर लागियो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत वडा नम्बर ३ सबैभन्दा भौगोलिक समस्या र विकास निर्माणका कामसमेत लामो समयदेखि हुन नसकोको हँुदा जनताको अपेक्षा अनुसार सबै काम पूरा गर्न सकिएन । तर आफूले भ्याए र बुझेसम्म सधै वडाको विकास र हितको लागि भने सधै खटिरहे । चुनाव अघि वडाको विकास र जनतालाई परेको अप्ठेरोमा काम गर्ने अठोटका साथ चुनाव लडिएको हो । त्यसैले वडाको विकास निर्माण र जनताको सुख, दुःखमा सहयोगसँगै काम गर्न कुनै कञ्जुस्याइँ नगरे जस्तो लाग्छ ।
आफ्नो घर व्यवहारभन्दा बढी वडाको विकास र समृद्धिको लागि लागिपरेको छु । तर पनि जनताको जुन अपेक्षा थियो त्यो अनुसारको विकासले गति भने लिन सकेको छैन । वडाले विकास निर्माण गति लिन नसक्ने थुप्रै कारणहरु रहेका छन् । तर पनि निरन्तर समग्र वडाको विकासको कुरालाई सोचेर अघि बढेको छु । निर्वाचित भएर आएको पनि पूरा बर्ष नाघेर यहाँसम्म आईयो पहिलो वर्षको अनुभव भएकोले पनि होला केही अलमल जस्तो भईयो । जनताको अधिकार घर आँगनमै आएको छ भनेर धेरै हो हल्ला भयो । तर जनताले त्यो अपेक्षा गर्न भने पाएका छैनन् । तल्लो तहमा रहेको वडामा बजेट कम पठाइएको छ । सबै बजेट माथिल्लो निकायमा केन्द्रित गरिएको छ । विभिन्न नयाँ प्रावधान र प्रविधिको समेत सुरुवात भएको छ, त्यसले गर्दा पनि काम गर्न केही सहज र समस्या दुबै थपिएको छ ।
अनुभव र जिम्मेवारीको हिसाबले पहिलो बर्ष भएकोले पनि होला । विभिन्न चुनौतिसँग सामना पनि गर्नुपरेको छ । त्यस्ता आईपर्ने चुनौतिहरुसँग सामना गर्दै काम गरिएको छ । यो वडामा मुख्य चुनौति भनेको सडक यातायातको समस्या हो यसमा सुधार ल्याउन केही समय लाग्ला । भौगोलिक विकटताको कारण यहाँ विकास निर्माणका काम गर्न निकै चुनौति रहेको छ । लामो समयदेखि यो वडा विकासमा निकै पछाडि पर्दै आएको छ । यसको वडाको ८० प्रतिशत बस्ती पहाडि भागमा रहेको हुँदा बस्ती व्यवस्थापनसँगै विकास निर्माणका गतिविधि गर्न निकै चुनौति रहेको छ । यो कुरामा वडा एक्लैले समाधान गर्न सक्दैन त्यसको लागि उपमहानगरपालिका, प्रदेश सरकारका साथै केन्द्र सरकारको समेत ध्यान पुग्न जरुरी रहेको छ ।
खानेपानी, विजुली, बत्ती, सडक सञ्जालसँगै अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम पूरा गर्न निकै चुनौतिको रुपमा रहेको छ । दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदा वडाले सञ्चालन गर्ने विभिन्न गतिविधिहरुसमेत राम्रोसँग अपडेट हुन सकिरहेको छैन प्रविधि चलाउन सक्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको छ ।
अवसरको हिसावले यो वडाको विकासको लागि जनता आफै क्रियाशील भएकोले जनतासँगै रहेर विकास निर्माणको काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने एउटा राम्रो अवसरसमेत रहेको छ । मुख्य कुरा कार्यकाल अवधिभित्र जनतालाई महसुुस गर्ने गरी विभिन्न विकासका काम गर्न सक्यो भने आउँदा दिनमा त्यसै अवसर खुल्छ । जुन कामको लागि म दिनरात पनि खटिरहेको छु । सँगसँगै कार्यकाल अवधिभित्र वडाभित्र रहेका प्रत्येक बस्तीमा सहज सडकको पूर्वाधार निर्माण गर्न सकियो भने त्यो पनि एउटा अवसर हुनसक्छ भन्ने ठानेको छु । सँगै प्रत्येक घरमा खानेपानीको व्यवस्था गर्ने योजनाका साथ अघि बढेका पनि छौँ । यो कुरामा निकै समस्या भएपनि केही काम गर्न सकियो । जुनकुरा आफ्नो कार्यकालमा पूरा गर्ने अवसरसमेत हुनेछ ।
हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो एउटा अवसर भनेको तुलसीपुर नगरपालिका हुँदा पनि विकास निर्माणबाट ठगिएको र हाल तुलसीपुर नगरपालिका उपमहानगरपालिका हुँदा पनि विकास निर्माणमा ठगिएको आभाष हुन नदिन जनताको मत जित्नु र विकासमा केही उपलब्धि हासिल गर्नुसमेत हाम्रा लागि अवसर हुन सक्छ भन्ने लाग्छ । त्यसको लागि म आफु स्वयम् र जनप्रतिनिधिको टिम लागेका छौं ।
सम्भावनाको हिसावले यो वडामा निकै कुराको सम्भावना रहेको छ । तुलसीपुर उप–महानगरपालिकालाई यही वडामा रहेको खानेपानीको स्रोतले खानेपानीको व्यवस्था गरेको छ । जुन स्रोतलाई अझ व्यवस्थित गर्न सकियो भने वडाभित्र रहेको खानेपानीको स्रोत हाम्रो वडाको विकासको लागि सम्भावना रहन सक्छ । अर्को कुरा यो वडाको अधिकांश क्षेत्रमा जंगल रहेको छ जहाँ विभिन्न किसिमका जडिबुटीका साथै विभिन्न खानीको समेत सम्भावना रहेको छ । त्यसको पहिचान र प्रयोग गर्नसके वडा मात्र होईन उपमहानगरपालिकाको विकासमा समेत ठूलो सहयोग पुग्ने सम्भावना भएको देख्दछु ।
यहाँ खासगरी तरकारी खेती पशुपालन र कृषिको हिसावले निकै महत्वपूर्ण वडाको रुपमा यो वडा रहेको छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा प्राकृतिक स्रोतको कसरी प्रयागे गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो । यो वडा धेरै नै सम्भावना बोकेको वडाको रुपमा रहेको छ । त्यसैले चाहे र गरेमा विकासमा फड्को मार्न ठूलो सम्भावना रहेको छ ।
अबको हाम्रो मुख्य योजना भनेको वडामा स्रोत भएर पनि यहाँ बसोवास गर्ने नागरिकहरु बर्षौ यता खानेपानीको लागि घण्टौ लाइन बसेर खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने समस्या रहेको छ । त्यो समस्यालाई कम गर्न योजना बनाएरै लाग्ने वडाको योजना रहेको छ । त्यसका लागि सबै तहको सहयोगको आवश्यकता रहेको छ । भौगलिक अवस्थाको कारण सडक पूर्वाधारको निकै समस्या रहेको छ । बस्ती व्यवस्थापनको पनि त्यत्तिकै समस्या रहेको छ, सडक पूर्वाधारसँगै वस्ति व्यवस्थापनको लागि लाग्ने सोच रहेको छ ।
बर्षौदेखि यहाँका नागरिक अध्याँरोमा बस्न बाध्य भएका छन् । त्यस्को समाधानको लागि केही कामको सुरुवात समेत गरेका छाँै र आउँदा दिनमा यो कामलाई अझ महत्व दिदै लाग्ने योजनामा रहेका छौँ । अर्को कुरा यो वडामा अहिले पनि सिंचाईको सुविधा पुग्न सकिरहेको छैन । सिंचाईका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्नु अबको हाम्रो योजना रहेको छ । खानेपानीको लागि विभिन्न योजनाहरु सञ्चालन भैरहेका छन् । यो पाँच बर्षे कार्यकालमा वडाको सबै घरहरुमा खानेपानी पु¥याउने हाम्रो योजना रहेको छ ।
यहाँको पशुपालन, कृषि तथा तरकारी खेतीलाई कसरी व्यवस्थित र आधुनिक तरिकाले सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो योजनाको रुपमा रहेको छ । हामीले वडामा सञ्चालनमा आएका विद्यालय तथा शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरुको भौतिक सुधारसँगै गुणस्तरियतामा समेत ध्यान दिने योजना बनाएका छौँ । यो बाहेक अन्य थुप्रै योजना रहेका छन् जुन योजना भनेर साध्य छैन । मुख्य कुरा काम गरेर देखाउनु पर्छ भन्ने कुरा नै महत्वपुर्ण भन्ने लाग्छ ।
उपलब्धिको हिसाबले हामी पहिलो बर्षमा विभिन्नखाले समस्या हुँदाहुँदै पनि केही कामको सुरुवात भने अवश्य गरेका छौँ । यो पहिलो बर्षमा हामीले वडाका रहेका विभिन्न सडक सुधार तथा निर्माणको काममा उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । जसको कारण कहिल्यै यातायातको साधन नपुग्ने ठाउँमा समेत यातायातको साधनहरु सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छौँ । जुन कुरा हाम्रो लागि एउटा ठूलो उपलब्धि समेत हो । सँगै खानेपानीका लागि केही साना योजनाहरु केही सुरुवात गरेका छाँै । वडामा रहेको विद्यालयको भौतिक सुधारसँगै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको केही भएपनि सुरुवात गरेका छौँ ।
विभिन्न किसिमका आयमूलक कार्यक्रम तालिमहरु सञ्चालन गरेका छौँ । मुख्य कुरा भनेको हामीले यो पहिलो बर्षमा जनताले थोरै भएपनि केही महसुस गर्ने गरी काम गरेका छौँ । जुन जनताले पनि महसुस गरेका छनर । जनतालाई खुशी पार्न सक्नु पनि एउटा उपलब्धि हो । र सबैभन्दा यो एक वर्षको मुख्य उपलब्धि भनेको वडाका जनता वडाको विकासको लागि सधै लागिपरेका छौँ । जुन कामको लागि वडाबासीहरुले पूर्ण साथ र सहयोग समेत दिएका छन्, त्यो मुख्य उपलब्धिको रुपमा लिएको छु